Fanatsarana fotodrafitrasa : hataon’ny CUA nomerika ny fitantanana ny gara Ampasampito | NewsMada
Fidinana ifotony nitondrana vahaolana. Anisan’ireo toerana notsidihin’ny ben’ny Ta­nàna, Andriantsitohaina Naina ny teny amin’ny tobim-pian­tsonan’ny taksiborosy, gara Ampasampito, tamin’ity herinandro ity. Anisan’ny toerana lehibe ary maro mpivezivezy ny eny an-toerana, tafiditra amin’ny toerana tantanin’ny kaominina Antananarivo Re­ni­vohitra. “Ilaina ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa. Anisan’izany ny toeram-pivarotana tapakila. Eo koa ny to­kotany ary ny toeram-pidiovana. Tokony ho madio, milamina ary maoderina, ho mendrika ny mpandeha sy ny mpitatitra ny toerana tahaka ito­ny”, hoy ny ben’ny Tanàna, tamin’izany.
Natsidiny sahady fa hirosoana ny tetikasa fanamboarana ny fotodrafitrasa ary hatao nomerika sy manaraka ny teknolojia ny fitantanana mba ho fanatsarana hatrany ny fomba fiasa.
Horaisina ny fepetra momba ny fahadiovana…
Etsy an-daniny, hapetraka ny fampiharana ny fehezam-pitsipika momba ny fahadiovana, ny fahasalamana, ny fi­laminan-tsaina, ny filaminam-bahoaka. Nivoitra tamin’ny fivoriana natao tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna, Analakely izany, omaly. Nambaran’ny mpitantana eo anivon’ny CUA, misahana ny fikoloana ny fa­hasalamana fa ilaina ny fikajiana ny fahasalamana sy ny fikoloana ny fahasalaman’ny mponina ary ao anatin’izany in­drindra ny fampiharana ny lalàna momba ny fahadiovana “code municipal d’hygiène», mirakitra ireo fepetra sy fitsipika tokony harahina eto anivon’ny kaominina Antanana­rivo Renivohitra. “Anton’iza­ny ny mba hisian’ny firindran’ny fiaraha-monina sy ny fahasalamana. Tanjon’izao fi­haonana izao ny fametrahana ny fomba fiasan’ity vaomiera ity, anisan’ny manapaka ireo fepetra tokony horaisina raha misy ny raharaha momba ny fi­koloam-pahasalamana tsy voavaha eny anivon’ny fiarahamonina”, hoy ny tompon’ andraikitra.
Hapetraka ny fenitra sy ny fanajana lalàna
Tahaka izany koa, raha tsy voavaha amin’ny alalan’ny fa­mpiasana ny «code municipale d’hygiène» na raha misy ny asa tsy voavahan’ireo «ins­pec­teur d’hygiène» sy ny po­li­sy monisipaly ary ny «inspecteur de voirie» eny anivon’ny fiarahamonina, hojeren’ny va­o­miera avokoa izany. Nan­te­rin’ny tompon’andraikitra fa tafiditra eo amin’ny fametrahana ny fanajana ny fenitra sy ny lalàna ny Tanànan’An­ta­na­narivo, ankehitriny. Havoaka amin’ny haino aman-jery, ny alakamisy izao ny «code mu­ni­cipal d’hygiène» ho fampahafantarana ny vahoaka.
Anisan’ny niatrika ny fi­vo­riana ny avy eo anivon’ny BMH sy ny tompon’andraikitra misahana ny rano, ny fidiovana sy ny fahadiovana ary ny Samva. Eo koa ny avy amin’ny minisiteran’ny Fiom­piana.